Kwechiitiko chakakosha, uye nechinhu chakaita sekukanganisa kwemari, ndakasarudza kuputika pane 10GBase-T kushandiswa kwebazi rangu rokuedza. Kuuya inenge inenge £ 800, yakaderedzwa kubva pa £ 1900, chikara ichi chakanga chisingabhadhari asi zvinoshamisa pasi pedanda rangu rega-mari-yega-kupinda kuti iite mu 10-gigabit game. Panzvimbo pokudzokorora kuchinja (unoongorora sei shanduro chero zvakadaro?), Ndinongoda kuenderera mberi nei chinhu ichi uye izvo zvandingaita nayo. Kunyanya zvimwe zvinotyisa-point-point bandwidth zvishoma.
Kutsvaga 10G paCopper
Imwe yemitambo yangu yemakore mumakore achangopfuura yave iri kusundira 10-gigabit kusungirirana - kunyanya Ethernet kupfuura mhangura (10GBase-T) - mumutengo wamatengo unonyatsokwanisa kune vashandi vekumba. Kwemazuva mazhinji, teknolojia iyi yave yakatengeswa yekutengeserana uye yebhizimusi: kumusoro kwe $ 100 nehanji yekutengesa uye $ 100- $ 200 pechipi yemakadhi ekuwedzera. Izvi zvinokonzerwa nekuti teknolojia inobata mabhenji nemabhizha, zvakadai seQoS, asi zvakare hakuna kumbove yakakura motokari yepamusoro pegigabit Ethernet mumba.
Munguva pfupi yapfuura izvi zvakachinja zvimwe. Mushure memakore gumi eIndel's 10G silicon pamashavha, Aquantia akapinda uye akatanga kuwedzera-mune makadhi pasi pe $ 100 - kwete kwete chete kwe10G asiwo itsva 2.5G uye 5G mitemo zvakare. Pfungwa yavo ndeyokuwedzera misika yekambani iyi, sezvo ichange iri mu backhaul uye inoshandiswa kumashure emashambadzi kwekanguva. Vaiva negore re2 kutungamirira vamwe pa 2.5G / 5G silicon, asi nyaya huru (sezvandakavatsanangurira kwegore rakapfuura) ndechokuti kuitira kuti zviitike mumusha zvinoda kuchinja. Izvi zvinogona kugadziriswa kana kusatariswa, asi chaizvoizvo zvinoda kuva $ 50 / port kana $ $ 30 / purogiramu yemasikirwo emashandisirwo emarudzi akawanda-gigabit kuti abvise zvachose. Ndinoita sarudzo yepaIndaneti nokuda kweizvi.
Kunze kwevashandi ve137 panguva iyoyo, nezve 10% vakati vaizokwira pa teknolojia pa $ 80 pamusuo. Inenge yechitatu inonzi $ 50 nehanji, uye 60% kana kuti ichitaura $ 30 pamusuo. Kuti ave akatendeseka, izvi zviitiko zvakange zvakapoteredza zvandaitarisira. Iwe pachako, ndinofunga $ 250 5-pikicha yekuvhara inenge iri huru yekupinda mumusika.
Zvose izvo zvinotaurwa, uye zvakadai sevanhu vakanaka paAcantia vanobvumirana neni, havaiti shanduko - iri kuNetgears, D-Links, TP-Links, uye zvakadaro kuti vavake. Handina hukama nomumwe wavo kuti ataure zvavanofunga, asi ivo havana kukurumidza sezvandaitarisira. Chimwe chinhu ndechokuti, ndinofungidzira, havadi kuvaka mashizha e10G asingakoshi anogona kukonzera bhizinesi kubva kumahombekiti ekutengeserana.
A paya kare, Aquantia asati apinda muchiitiko, takaita chimedu pamusoro bhobho rese yemakambani ane 10GBase-T yakavakwa. Ichi chinyorwa chakaona chisina kunyatsofambisa kwechidimbu chipfupi, asi chakaratidzawo mabhobhobho emadzimai ose aishandisa Intel's X540-T2 mutevedzeri chip. Pamapuranga aya, chip chikadhura (kuwedzera $ $ 250 kumutengo wekutengeserana), simba raive nenzara, uye raida nhamba yakanaka yePCIe nzira. Icho chakanyanyisa ndechokuti mazhinji emapuranga aya akanga ari pari mbiri.
Kubvira ipapo, takaona mapuraneti ane Aquatia AQC107 (uye AQC108) machipisi ari mubhodhi, ayo anokwidza mutengo webhodhi ne $ 70- $ 100 pachiteshi chimwe chete, asi iyi ichiri nzira iri nyore kwazvo yekugonesa chero chinhu chiri nani kupfuura gigabit Ethernet paPC. Ikozve kune huwandu hwe10GbE PCIe makadhi anowanikwa, anomhanya pamadhora zana.
Kana iri iyo inoshandiswa, zvingasarudzwa chete zvaive zvakatarisirwa ne8-port maenzaniso kubva pane zvaidiwa zveNetgear, zvakadai seNetgear XS708E, iyo yaiva yakapoteredza $ 750 mark. Kubhadhara mari inenge madhora $ 80- $ 100 pamusuo (pashure pemitero), sezvatakaona muchisarudzo chiri pamusoro, ichinyorwa chiduku chendaneti uye hachifariri vashandi vakawanda.
Mugore rekupedzisira kana kuti, kune huwandu hwemashanduko akawana pamusika kupa mairi maviri 10GBase-T uye hupfumi 1G ports. Izvi zvinosanganisira kushanduka kwakafanana ne ASUS XG-U2008, iyo yave ichitengeswa $ 250- $ 300 kana kudaro, Netgear inotarisa GS810EMX pa $ 250- $ 300, uye Netgear GS110EMX iyo isiri yemitambo yekunyorera zvishomanana. Dambudziko nemisasa iyi ndeyekuti vane mabhuku maviri - hapana nzira yekuita 'muti' kubva kwavari, inowanzova inodhura yakananga-kusvika-kumwekubatanidza, zvichipiwa mari shoma yegigabit switches.
Nhamba yeNetgear Gaming 2x10G + 8x1G yakagadziriswa
Saka sevhiki ino, nyika yekutamba yaiva iyi yezvipiriso zve 10G:
£ 175 / $ 200 ye 2-port (GS110EMX), $ 100 pamusuo
£ 395 / $ 435 ye 4-port (QNAP QSW-802-4C), $ 110 pamusuo
£ 504 / $ 553 ye 8-port (Netgear XS708E), $ 70 pamusuo
£ 1182 / $ 1300 kana 12-port (TP-Link T1700X-16TS), $ 108 pamusuo
£ 1230 / $ 1350 ye 16-port (Netgear XS716E), $ 84 pamusuo
Zvinopiwa zvacho zvichiri zvakanaka zvakakosha kune ani zvake anotarisa 'kugadzirisa nokukurumidza' kuitira 10GBase-T mumba.
Yakanga Yakashata kana chimwe Chinhu
Saka vhiki ino, apo nhengo yemhuri yakandikumbira zvandaida zvekuberekwa kwangu, ini ndakatotanga kupfurikidza neimwe shanduko yekunyora. Ndichifunga kuti ndinogona kungoerekana ndaputika kune 2-port, ndaitarisira kuti 8-port yainge yasvika mumutengo. Zvandakawana, pasina dambudziko guru, raiva Netgear XS724EM, 24-port 10GBase-T. Kutsvakurudza kwangu kwakanga kusiri kwezvikepe zvakawanda - ndaifunga kuti zvingangove zvakadhura.
IXS724EM yakanga ine RRP ye £ 1700. Mutengo uri mberi kwangu waiva £ 782. Mushure mekurumidza kuenda ku Twitter, chakanga chisina bhodzi (ed: Ndichiri kufunga kuti unopenga). Pa £ 782 / $ 858, iyi yaive 55% dhisikaundi, uye inouya ichingori pasi pe $ 36 pachiteshi. Ini ndaitarisira pane imwe nguva kuti mutengo weswitch waizodzika mumutengo, kunyangwe ini ndaisatarisira wekutanga kuita kudaro angave akakurisa. Kwete izvozvo chete, asi inotsigira zvese zviri zviviri 5G uye 2.5G futi, saka zvichiri kubatsira nekuvapo kweCat5e kumhanya.
Kana iwe uchienda kune peji nhasi, uchaona kuti izvi zvingava zvakashata.
Chikwata ichi chakakonzerwa ne £ 1280, inenge £ 500 kupfuura zvandaibhadhara. Taura zvakanaka. Prime kutumira zvakare.
Unboxing ye XS724EM
Mushure mokuratidza bhosi kune vagari vanogara vagine, yakanga yava nguva yekuona zvataiva nazvo. Kune rumwe rutivi runopa ruzivo rwakakosha ruzivo. Ichi chikwata chinorema 3.72kg / 8.21 lbs, iyo ichava chinhu chinokosha kune vamwe vashandisi.
Mubhokisi, chikwata chacho chakanyatsorongedzwa nemapuranga, kunyange zvazvo pane nzvimbo shoma kumusoro uye pasi apa inofanira kuvharwa.
Kunze kwebhuku racho, bhokisi racho rakauya nemaketani maviri emagetsi (imwe UK, imwe EU), pamwe chete nemakumbo erubhadhi kune vashandisi vanoisa kuvhara pane dawati pane imwe nzvimbo, uye mabhoketi kuti awedzere chiguniti kusvika kune rimwe ra19-inch rack. Zvimwe zvemashoko ari muIndaneti zvinoratidza kuti mune rack, achishandisa zvidzidzo, inopedzisira ichitsvaira zvakasimba kwazvo, ichiisa nguva yakawanda pazvidzidzo kana iyo unit isiri pamusoro pevharesi. Muchiitiko ichi, zvingave zvakanaka kupa mari mumigwagwa.
Bhuku racho rinopa mienzaniso yekuti ungabatanidza sei kushandura kune zvigadzirwa zvakawanda. Zvinofadza kuti inofunga kuti kumitambo yekambani ne 2.5G kuwirirana kune imwe inowanikwa - Ndinofunga mumwe munhu anofanira kutaura Netgear izvi hazvisizvo.
Iko kunewo purogiramu ye smartphone kunobatsira nehuwandu hwekutarisira.
Tsamba dzechinoshandiswa dzakagadzirirwa kuiswa pamberi, uye tinowana 24x 1G / 2.5G / 5G / 10GBase-T pari dzematafura eRJ45. Kunewo maviri 10G SFP + ports pane kurudyi, akabatanidzwa nevekupedzisira kweE10GBase-T ports saka rimwe chete rinogona kushandiswa kamwechete.
Mwenje pane imwe gigabit yeEthernet port inowanikwa zvose zorineni uye inofambisa nedata. Muchiitiko ichi, kuti uone 2.5G, 5G, uye 10G, ma LED anoenda aine ruvara uye achave nemaitiro akasiyana maererano nekubatanidza.
Pane Kensington Lock kune rekuchengeteka kwepanyama.
Mhepo inoyerera kuburikidza neyuniti inopiwa nevateveri vatatu pedyo nekutora, pamwe nekudya kune rumwe rutivi.
Kuzarura chaisisiti kunotora zvidziro zviviri kune rumwe rutivi uye zvitatu kumashure. Iyo inofambisa sezvinoenderana neserivha yevaseri chasisi, kuchengeta mberi panhizha.
Pamberi pechitsikisi, yakafukidzwa mune chifukidzo, mune yakavakwa mune simba. Iko PCB huru ine maverengi makuru heatsinks pamusoro payo, izvo zvatichawana pane zvishoma.
Vaya vari muchiteshi chechasisi ndivo Delta AFB0412SHB vanoshushikana, uye izvi zvinogona kukanda ruzha rukuru. Nenguva iyo nguva bedzi yandakazvinzwa zvakakwana ndeyokuti ichitenderera chikwata chacho.
Pamusoro pePBB ndivo vatongi vakaputirwa mualuminium heatsinks. Aya heatsinks akare uye akaremara, uye pane kunyange patare yesimbi pamusoro pekushanduka kwechigadzirwa.
Ini chaizvoizvo ndakaedza kubvisa ndiro iyi kuti ndione vatongi vari pasi, asi iyo yakanga isina-kuenda. Iheatsinks chaizvoizvo inoshandisa mamwe mapapu emapurisa kuti kuchengeta ndiro yakabatanidzwa uye kuitisa kupisa kwemhepo kuburikidza neyuniti. Sezvo ndakatenga chikwata ichi pachedu nokuda kwekushandisa kwangu, pane mari yaAnandTech kana kuti shanduro yekuongorora, ndakanga ndisingadi kuvhara zvinhu. Ndine hurombo.
Pashure pokugadzirisa zvose pamwe chete, uye kuisa tsoka dzebhiribhu, yaive nguva yekuzvibatanidza kumba kwangu.
Izvi zvinenge zvichigara pamharadzano yemabhati angu mashanu ekuedza, pamwe neshevha yevhavha yepamu (kuti iite kuti zvinyorwa zvitsvaga), NAS yeruwa, uye mamwe maitiro. Zvechokwadi, ndichave ndichiita rimwe rearrangement yehofisi munguva pfupi kuti ndiite zvakanyanya kubva pane shanduko.
Iyi ndiyo shanduro inogadziriswa, iyo inoreva kuti pane mukana wekupinda uye kuronga zvose zvigadziriro. Zvisinei, kune vashandisi vanoda kungoishandisa semushanduko, zvinenge sezviri nyore sekuvhara uye kutamba. Zvechokwadi, yaiva ipura uye inotanga kutanga - kuitira kuti nzira yacho iite nyore, ndakapinda mukati mewebhu webhutheni yechinja uye akaremara DHCP kuti iite zvakajeka (DHCP inoshandiswa ne router yangu).
Kupindira mukati kwaiva kwakananga (IP uye password zviri pasi pechibvumirano, uye password isiri iyo password), uye kutungamirirwa kwetsika kunoratidzika kwakakodzera pane zvakagadzirirwa. Vashandi vanogona kutaurira kuti zvikwata zvakabatanidzwa pane zvakakurumidza, uyewo kugadzirisa kuwirirana kwechiteshi, nekugadzira VLAN. Mune mhaka ini handisi kuzoshandisa zvakawanda zveizvi, asi VLAN neQoS zvisarudzo zvichava kiyi yevashandi vehofisi.
Sezvarinoitika, kuedza kutengesa hardware kwakaoma. Kana iwe uchida chaizvo kuwana tsanangudzo yakajeka yechitsinhanho, inoda chikamu chakanakisisa chemasikirwo e12-16 achikurova zvakaoma, achibatanidza migumisiro ye latency uye bandwidth, uyewo kuchengetedza simba, kutonhora, uye ruzha. Zvinosuruvarisa kuti handina nguva kana zvivako zvekuita izvozvo, asi kukurumidza kukurumidza kweperesi yepamusoro-kuru-kukurumidza pane izvo zvatinazvo.
Nokuda kwemaitiro edu ekuedza, kune rumwe rutivi ndine AMD Ryzen Pro 2400GE (35W) APU system ine Intel X540T2 PCIe kadhi yakagadzirirwa, uye imwe mugumo ibhokisi re X170 rine Core i3-7100T (35W) uye Aquantia AQC107 PCI kadhi yakagadzirirwa. Zvose izvi zvaishanda Win10 x64 Enterprise 1803. Ndakamhanya makadhi akachengetedzwa uye madereji, haana kuita imwe shanduko kuchinja, uye yakamhanya nhare kuburikidza nhamba yezvibatanidzwa zvakafanana.
Zvisingagadziriswa zvirongwa muIperf uye pamatongerwo maviri akaratidza kuti tinokwanisa, muchirevo, kusvika pakufambisa kwehuwandu hweHNMX Gbps. Makadhi anogonawo kunge ari kukanganisa pano - nengozi dzekuongororwa kwekutengesa ndeyekuti kadiri 9.3G kadhi yakabatanidzwa kuchina che 10G yakabatana kune imwe kadhi ye10G; zvimwe chimwe chezvikamu zvitatu chingave chigadziro. Ndakatarisa kuti iperf inoshandiswa nyore nyore 10% yeimwe tsvina pane imwe yega yega, saka zvingava kuti tinoda kukurumidza CPU yekushanda nani nani.
Asi kunyanya kunetseka kana uchitenga shanduro yakaita seyi mhere. Uyu ndiwo mutsara wakagadzirirwa hubbub yehofisi duku, kana ravha yevhavha - kwete yehofisi yeimba kwandingave ndakanyora audio. Kunyange zvakadaro pakushandisa kwandakatanga, nguva chete iyo vateki vauya nayo ndiyo iyo iyo mishanduri ichishandurwa (semamwe mabheji emabhadhari vashandura mavheti ose kuti azere kusvikira nguva yekutanga inopera). Mushure mokutanga iyo 15 yechipiri yekutanga, mafungu anoenda kune akanyarara. Apo kuongororwa kwendima-kusvika-kumweka kwepamusoro kukurumidza kwemaminitsi mashomanana, chikwata ichiri chinyarara. Zvinowanzoita kuti zvive zvakasviba kugunzva, asi mukugadzirisa kwangu hazvibviri munzira. Ndine chokwadi kuti ndinogona kuwana nzvimbo yemakate kuti igare pairi uye inofara.
Sezvakataurwa, ndakabhadharira pamusoro pemari yangu chaiyo yei hardware. Pa $ 36 pari, ini ndichiri kushamisika kuti yekutanga yakayambuka yangu $ 50 mutsara yaiva guru 24-port switch, saka ikozvino ndava nekodzero yezvose zvandakaronga (ed: inogona kusanganisira CPUs uye mabhodhi emadzimai). Chinhu chakakosha apa, kwandiri, chichava kuedza kwangu - bvunzo nyowani nyowani inoda 100GB yeCPU bvunzo uye 800G + yemitambo bvunzo, saka kuteedzera izvi pamusoro zvinotora nguva. Pane gigabit network, kushandisa yangu nyowani Steam Cache zvinoreva kuti pakumhanya kwe70MB / sa mutambo mukuru senge GTA5 inogona kutora maminetsi gumi nematatu. Ndiri kutarisira kuti ne13G, kana ichigona Push iyo yekumhanyisa kumhanyisa kumiganhu yeSATA, kuti iyo yakazara nguva ichave yakadzika kusvika pamaminetsi maviri. Kune zvakare mukana wekuita imwe network kadhi kuyedza mune ramangwana izvozvi.
Tenga Netgear XS724EM pa Amazon.com
Yakanakisa Wi-Fi extender 2021: Kuvandudza isina waya kufukidza uye kumhanya kubva pa £ 35
Iwe unofanirwa kuenda neNetgear Orbi kana Linksys Velop kune yako Wi-Fi 6 mesh?